Iyi pfungwa inofungidzira kuti akawanda-mavara-akarukwa tambo tambo angave | Ndinobva mac
Pfungwa iyi inofungidzira kuti tambo dzakarukwa dzechiuno dzine mavara akasiyana siyana dzingave dzakadii
Vazhinji ndivo vagadziri vanopa vakasununguka kudzora kufunga kwavo, zvichibva, pazviitiko zvishoma kwazvo, pane runyerekupe runoburitswa nezve Apple mapurojekiti, saka vane mashoma mikana yekuva inobatika. Nhasi tinotaura nezve imwe yakabatana neApple tambo uye iyo ine mukana wakanaka wekuve wechokwadi.
Nekutanga kweApple Watch Series 6, Apple yakaunza fomati nyowani yetambo, iyo Solo Lopp. Yekutanga Apple Guy akatumira paakaundi yeTwitter zano senge ivo vangave kana vakashandisa mavara akati wandei uye mhedzisiro, sezvatinoona, inonakidza kwazvo.
Kana Apple ikamboburitsa akawanda-mavara Akarukwa Solo Loops yeApple Watch, ndakamonerwa. 💸 💸 pic.twitter.com/w9IwNC65cL
- Yekutanga Apple Guy (@BasicAppleGuy) February 4, 2021
MuApple Chitoro, Apple inopa vatengi vayo 5 Solo Loop tambo mumavara: Atlantic Bhuruu, Inverness Green, Grenadine Pink, (PRODUCT) RED uye Marasha.
Pfungwa iyo Basic Apple Guy yakagadzira ndeye zvakanyanya kutaridzika kupfuura mamodheru ayo Apple parizvino anotipa isu makumi masere nemapfumbamwe euros nhasi. Kana Apple isina kuzvifunga (chimwe chinhu chandinofungidzira zvakanyanya) zvingangoita kuti, mumwaka unotevera, Apple ichatanga vhezheni nyowani dzeiyi tambo yakagadzirwa mumarudzi akasiyana siyana.
Ndeipi tambo yandinotenga yeApple Watch?
Sezvo Apple yanga ichiwedzera katarogu yemabhande aripo muchitoro chayo uye huwandu hwemienzaniso zvinoenderana nekupedzisa, kuwedzerwa kune maviri saizi vhezheni yainopa, sarudza Apple Watch rave odyssey, kunyanya pakusarudza tambo kana iyo iyo Apple inosanganisira natively isiri yako yaunoda.
Apple inoziva iyi (yekutanga nyika) dambudziko uye inoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi iyo Apple Tarisa Studio, peji rewebhu kwatinogona kusarudza ese ari maviri makesi acho (40 ne44 mm), izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa (aluminium, simbi isina chinhu uye titanium) uye tambo (Solo Loop, Solo Loop Yakarukwa, mitambo, mitambo chiuno, dehwe nesimbi isina chinhu).
Sezvatinosarudza mhando yetambo (iyo yakaoma kwazvo), iyo skrini inoratidza mavara ose aripo, saka kugadzira kusarudzwa kwemuenzaniso watinoda zvakanyanya kuri nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Pfungwa iyi inofungidzira kuti tambo dzakarukwa dzechiuno dzine mavara akasiyana siyana dzingave dzakadii
Hechino chinongedzo chekutenga tambo dzekusungira nemavara akasiyana siyana pamitengo inosetsa:
Iyo wachi inodhura € 299 uye tambo inodhura chetatu.
Zvinotaridza kwandiri kuti € 99 yechimedu chereash kubira-kwakaguma.
Ajax & Diomedes yeA Yakazara Hondo Saga: TROY mutambo uripo Kukadzi 10
Mamwe mazita maviri eTed Lasso, izvozvi kubva kumakambani eSAG